जीवन एकैनास हुँदैन । कहिले सुखै सुख हुन्छ अनि कहिले विभिन्न परिस्थितिले गर्दा दुःख आइपर्छ । कहिले सहज हुन्छ अनि कहिले असहज । तर यस्तो अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि खुसी रहने तरिकाहरू छन् ।दुःखी हुने कि खुसी हुने मानिस आफैंले राज्ने हो । खुसी अन्यत्र खोजेर पाइदैंन । यो त आफैं भित्र सृजित गरिने, बनाइने अनि रोजिने कुरा हो । भनेजस्तो धेरै अंकको तलब भएको जागिर पाएर,
सुन्दर घर बनाएर वा सोचे जस्तो जीवन भएर पनि खुसी प्राप्त गर्न सकिदैंन । हरेक दिन बिहान उठेर आफूसँग जे कुरा छ त्यसैको प्रशंसा गर्नु पर्छ । आफूलाई खुसी राख्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ । यसो भए मात्रै तपाई जीवना खुसी रहन सक्नु हुनेछ ।
त्यसो भए कहाँबाट शुरु गर्ने ?
जिन्दगीमा हरेक दिन राम्रो हुँदैन । अनि हामी सबैको जीवन उत्तम पनि हुँदैन । कहिलेकाँही स्थिति नै हाम्रो नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । हामीहरुलाई दुःखी बनाउँछ पीडा दिन्छ । सहनै नसक्ने स्थितिमा समेत पुर्याउँछ । कसैके पारपाचुके भएका हुन सक्छ । कसैसँग खल्तीमा एक पैसा नभएर टाट पल्टिएका अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ । कसैले तपाईलाई भेदभाव गर्छ । परिवारका सदस्य, आफन्त वा साथीभाइको मृ’त्यु भएको हुन सक्छ । तपाईमाथि झुठा आरोप लाग्न सक्छ । स्थिति जे भएपनि जीवन चलिरहन्छ । कहिले अडिदैंन । कहिले काँही त यो संसार पनि बाँच्न र बस्न अप्रिय र कठोर लाग्छ ।
‘संसार मप्रति निर्दयी हुँदा म कसरी खुसी रहन सक्छु ?’ भनेर तपाइले मलाई प्रश्न गर्न सक्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाइले आफूसँग के छ ? कहाँ जान जान चाहनु हुन्छ ? त्यसअनुसार अर्को कदम चाल्नु पर्छ ।जीवन भनेको दृष्टिकोण हो । तपाइको दृष्टिकोणले वास्तविकतालाई आकृति दिन्छ । खुसी रहनका लागि तपाईले गर्न सबै महत्वपूर्ण काम भनेको जीबनसम्बन्धी धारणा परिवर्तन गर्नु नै हो ।
के हो जीवन ? जीवन तपाईको मस्तिष्कमा सानै देखि रोपिएका अनेक विचार र धारणा अनि तपाईले यसकै आधारमा देख्ने संसारको समष्टिगत रुप हो । मानिस जन्मिँदा उसको मस्तिष्क खाली पाटी झैं हुन्छ, कागजको सेतो टुक्रा जस्तै । बच्चा अवस्थामा हाम्रा धारणा, सोचाइ र मूल्य पनि केटाकेटीको जस्तै हुन्छ : कञ्चन ।
हुर्कदै गएसँगै अरुले हामीमाथि उनीहरुको धारणा, विचार र मूल्य थोपर्छन् । अनि हरेक हप्ता हाम्रो दिमागमा नयाँ नयाँ मूल्य रोपिन्छन् अनि हुर्कन्छ । यसले तपाईको वास्तििवक धारणा नै बन्द गर्छ । अनि एवम् रितले सेतो कागज अरुले कोरेको कुराले भरिन्छ । हामीसँग त्यसैमा अलमल पर्छौ । त्यसैले जीवनभर हामी लड्खडाउँछौं, कहिले लड्छौं कहिले उठेर हिड्छौं । बोलीरहेको कुरा किन भन्यौं भन्ने थाहा पाउँदैनौं । आफूलाई विश्वास नै नलाग्ने कुरा पनि भन्छौं । अनि आफू किन खुसी भए वा दुःखी भए भनेर पनि अचम्ममा पर्छौ । हामीहरु सबैको मनमा सानो छँदा झैं सरल, द्विविधा रहित र द्वन्द्वरहित जीवन बिताउने घरमै बस्न, सुरक्षित हुन र खुसी रहने चाहना हुन्छ ।
तर यसको एउटै उपाय भनेको आफूलाई काम नलाग्ने विचार वा धारणा दिमागबाट मेटाउने नै हो ताकि अरु कुरा अलि स्पष्टसँग देख्न सकियोस् । बच्चा बेलामा रोपिएको आदर्श जीवन डोर्याउन पर्याप्त हुँदैन । मानौं बच्चा बेलामा बास्केटबल खेल्दा तपाइ पराजित हुनुभयो । त्यतिबेला प्रशिक्षकले तपाइलाई गाली गरे होलान्, अरुको अगाडि अपमानित भएको महसुस पनि भयो होला । अनि त्यही अनुभवका आधारमा तपाइले मन म कहिल्यै राम्रोसँग बास्केटबल खेल्न सक्दिन भन्ने पाल्नु भयो । यस्ता खालका नकारात्मक मूल्य र अनुभवले उल्टै तपाइको खुसीमा अवरोध पुर्याउँछ । यो सत्य होइन । यो त तपाइले मनमा गुथेको कथा मात्रै हो ।
तपाइ एक पटक बास्केटबलमा पराजित हुनको अर्थ सधैं त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन । राम्ररी अभ्यास गर्नु भएन वा कोशिश गर्दा गर्दै पनि कही कतैं चुक भयो । यसको अर्थ सधैं यस्तै हुन्छ भन्ने त होइन नि । त्जीवन तपाइले सजिलो बनाउनु भयो भने सजिलै हुन्छ गाह्रो ठान्नु भयो भने गाह्रो । यसो भएर सहज खुसी कसरी रहने त ?
१. खुसीलाई रोज्नुहोस्
खुसी पनि अन्य चिज जस्तै सृजना गरिने अनि छानिने कुरा हो । त्यसैले तपाइले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको म सधैं खुसीलाई नै रोज्छु भनेर प्रतिबद्ध हुनु हो ।यसको बाटो सहज छैन । कतिपय कुरालाई तपाइले यस्तै रहेछ भनेर छाडिदिनु पर्छ । एउटै कुरा मनमा खेलाइरहने चिन्ता लिइरहने गर्नु हुँदैन । खुसी वा आनन्द जीवनपर्यन्त प्रतिबद्धता हो । वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउन तपाइले जसरी निरन्तर प्रयास गर्नु हुन्छ आफूलाई खुसी राख्न पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहनु पर्छ । खुसीको क्षणलाई पनि सराहना गर्न जान्नु पर्दछ । किनकि खुसी सधैं तपाइको साथमा नरहन पनि सक्छ । यो उडेर जान्छ । अनि यो संसार सधैं तपाइप्रति दयालु पनि हुँदैन ।
२. जीवन अनि आफूले प्राप्त गरेको वस्तुप्रति कृतज्ञता देखाउने
कहिलेकाँही स्थिति नियन्त्रण बाहिर हुँदा हामीलाई बिझ्छ । हामी रुन्छौं, कराउँछौं अनि आफैंलाई पीडा दिन्छौं ।तर यस्तो बेलामा पनि आसपास हेर्नु भएको छ ? कसैसँग पैसा हुँदैन । कसैलाई केको अभाव छ । कसैलाई रोग लागेको छ । कोही व्यक्ति माया गर्ने मान्छे नभएर एक्लै जीवन बिताइरहेका छन् । तर तपाइसँग अन्य व्यक्तिसँग नभएको कुरा पनि त हुन सक्छ । बाँच्नका लागि चाहिने पर्याप्त पैसा होला, आसपास माया गर्ने आफन्त र साथीभाइ होलान् । तपाइसँग तपाइले प्राप्त गरेको वा स्वीकारेको भन्दा पनि धेरै कुरा हुन सक्छ । त्यसैले आफूसँग नभएको कुरामा सोचेर रोइरहनु भन्दा आफूसँग भएको कुरालाई महत्व दिनु होस् ।
सधैं केही समय छुट्टयाउनु होस् । आसपास हेर्नुहोस् अनि हरेक दिन डायरीमा केही न केही लेख्नु होस् । आफूसँग भएको चिजप्रति सरहाना देखाउनुहोस् । आफूसँग वास्तवमा के के रहेछ त भन्ने कुरा महसुस गर्दै गएपछि कृतज्ञ महसुस हुन्छ । खुसीले तपाइलाई पछ्याउँदै जान्छ ।
३. फेर्नुहोस् आफैंले आफैंलाई सुनाउने कथा
हामी आफूले बटुलेर राखेको, अरुलाई बताउने अनि आफूले आफैंलाई सुनाउने कथाका संग्रह हौं । हामी जे हौं भनेर भन्छौं त्यही नै हुन्छौं । तपाइले कसैलाई म त इमान्दार छु भन्नु भयो भने उसले तपाइलाई त्यही रुपमा लिन्छ । म त यो गर्न सक्दिन भनेर सोच्नु भयो (आफैंले आफैलाई बताउनु भयो) तपाइले त्यो काम कहिले गर्न सक्नु हुन्न ।
जस्तो कथा कथ्नु हुन्छ तपाइ ठ्याक्कै त्यस्तै बन्नु हुन्छ । तपाइले आफ्नो जीवनबारे कस्तो कथा भनिरहनु भएको छ ? असफलताको कथा ? हरुवा ?अहिलेको संसारमा आफूलाई पीडित देखाउने चलन छ । किनकि फिल्ममा पनि अन्त्यमा पराजित भएको/हारेको/दबाइएको व्यक्तिले जितेको देखाइन्छ । तर उसले जटिलतालाई चिरेर, सहि काम गरेर अप्ठयारो स्थितिमा पनि बहादुरी देखाएर आफ्नो कथा आफै लेखेर जित हात पारेका हुन् ।
त्यसैले चिन्ताजनक अवस्था, लाजमर्दो क्षण र आफैंलाई हानी पु¥याउने अनि हार, पीडा र दुःखाइका कथाहरूलाई फ्याकिदिनुहोस् । यस्ता दुःखका कथा भएका किताबलाई चितामा जलाइदिनुहोस् । जीवन खराब अनुभवको मात्रै संगालो होइन । यस्तो सोच्न छाडिदिनुहोस् । त्यस्ता अनुभवले थिचिएको वास्तविक आफू प्रति प्रश्न गर्नुहोस् । को हो तपाई ? तपाइ अहिले के बन्न चाहनु हुन्छ ? जीवन रुपी कथालाई सुन्दर अक्षरमा लेख्ने काम तपाइ आफैंले मात्रै गर्न सक्नु हुन्छ । म त हरुवा होइन, म बलवान व्यक्ति हुँ भनेर तपाइ भन्न सक्नु हुन्छ । म सँगै कुनै चिन्ता छैन, व्याकुल महसुस नगर्न म सकेको गर्छु । म एक दम ठीक छुँ । आदि आदि ।हरेक दिन आफूलाई खुसी राख्ने कथा खोज्नु होस् अनि यसैलाई मुख्य पात्रको रुपमा देखाउनुहोस् । आफ्नो कथा आफैं लेख्नु होस् । यो कथाले मलाइ खुसी बनाउँछ भन्ने पक्क गर्नु होस् । अनि जीवन सधैं खुसी हुन्छ ।
४. आफूले खोजेको जीवन निर्माण गर्ने
कहिलेकाँही मानिसले सोचेको ठिक उल्टो भइदिन्छ जीवन । सोचेको कुरा नपुग्दा पनि मानिस खुसी हुन सक्दैन । त्यसैले आफू के बन्ने ? कस्तो जीवन जिउने ? भनेर निर्णय गर्नुहोस् । यसको लागि योजना बनाउनु होस् । आफूले देखेको सपनाको जीवन पूरा गर्न, जिउन हरेक दिन केही न केही योजना बनाउनुहोस् । सो सपना हासिल गर्न स–साना कदमहरु चाल्नुहोस् । यो गरेर तपाइलाई खुसी महसुस हुन्छ । तर जीवन एउटा यात्रा हो । माथि टुप्पोमा बसेर हेर्ने मात्रै होइन यात्राका क्रममा भेटिएको कुराहरुको सराहाना गर्न पनि सक्नु पर्छ ।
तपाइले सिक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भनेः अरु नै कुराले मलाई खुसी बनाउँछ भन्ने सोच्नु भयो भने तपाइ कहिले खुसी हुन सक्नु हुन्न । नयाँ जागिरले तपाइलाई खुसी दिँदैन । न त नयाँ जीवन साथीले । न त घर, बिदा, कुनै वस्तु वा घर पालुवा जनावरले नै तपाइमा खुसीको टुसा पलाउँछ । यो खुसी होइन । यो त दिमागमा हुने रसायनीक प्रतिक्रिया मात्रै हो ।खुसी भनेको हरेक दिन स्थिति कठिन भएपनि, आफूले नचाहेको अवस्थामा पुग्दा पनि, केही कुरा नपाएपनि आफूसँग भएको कुराको सरहाना गर्ने अनि त्यसैमा रमाउने विकल्प हो ।
खुसी सधै हाम्रो आफ्नै हातमा हुन्छ । यो नकारात्मक कुरामा समेत सकारात्मक देख्ने मानसिक विकल्प हो । जीवनमा आइपर्ने दुःखले नै मानिसलाई नयाँ नयाँ पाठ सिकाउँछ । व्यक्तिलाई निखार्छ । संघर्ष भनेको वृद्धि र बल दुबै हो । जीवनमा परिस्थिति जति नै कठिन, पीडादायी र कठोर भएपनि आभारी हुन सकिने केही न केही कुरा पक्कै हुन्छ । यही कुराहरु हेरेर पनि तपाइ खुसी रहन सक्नु हुन्छ । तर खुसी रहने कि दुःखी भन्ने चाँहि तपाइले छान्ने कुरा हो ।